Online Marg | मध्य दशैंमा नेपाली सेनाभित्रबाट फेरि ठूलै काण्ड बाहिरियो, केही दिन अघि मात्रै प्रधानसेनापती बनेका शर्मा ठूलो तनावमा !
मध्य दशैंमा नेपाली सेनाभित्रबाट फेरि ठूलै काण्ड बाहिरियो, केही दिन अघि मात्रै प्रधानसेनापती बनेका शर्मा ठूलो तनावमा !
बिहिबार, असोज २८ २०७८
काठमाडौँ – मध्य दशैंमा नेपाली सेनाभित्रबाट ठूलै काण्ड सार्वजनिक भएको छ । नेपाली सेनाभित्र अनुशासन उल्लङ्घनका घटनाहरु बढ्न थालेका छन् ।
दैनिक यस्ता घटना बढ्न थालेपछि केही दिन अघि मात्रै प्रधानसेनापछि बनेका प्रभुराम शर्मालाई तनाव भएको हो ।
उनीहरुको यस्ताखालका हर्कतले नेपाली सेनाको बदनामी भएको छ । सेनामा हदभन्दा बढी गर्ने नहुने कार्यहरु बाहिरिन थालेपछि उनीहरुको नैतिकतामाथि प्रश्नसमेत उठेको छ ।